Android ဖုန်းတစ်လုံး ဝယ်ယူပြီးတာနဲ့ ပြင်ဆင်သင့်တဲ့ Setting ၅ ခု
Knowledge • Mobile
Android ဖုန်းတွေက Brand မျိုးစုံရောင်းချနေတာဆိုပေမယ့် Google ကထုတ်လုပ်တဲ့ Android OS ကိုပဲ အသုံးပြုနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် အခြေခံ Setting တွေကတော့ ဖုန်းတိုင်းတူညီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် Android ဖုန်းသစ်တစ်လုံး ဝယ်ယူပြီးတာနဲ့ နောက်ပိုင်း အသုံးပြုရတာ အဆင်ပြေစေဖို့အတွက် ပြင်ဆင်ထားသင့်တဲ့ Setting ၅ ခုကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
1. Brightness ကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း
ဆိုင်မှာဖုန်းကို ဝယ်ယူဖို့ကြည့်ရှုတဲ့အချိန်မှာ ဖုန်းရဲ့ Screen က သာမန်ထက်လင်းနေတာကို ကြုံဖူးမှာပါ။ အဲ့ဒါက ဖုန်းဆိုင်က အရောင်းဝန်ထမ်းက Screen Resolution ကိုပိုပြီးထင်ရှားနေအောင် Brightness ကို အမြင့်ဆုံးထားထားတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းကိုဝယ်ယူပြီး အသုံးတော့မယ့်ဆိုရင် Brightness ကို အမြင့်ဆုံးထားတာက ဖုန်းကို Heat တက်စေသလို Battery ကိုလည်း ပိုစားစေတဲ့အတွက် Brightness ကို 50% လောက်မှာပဲ ပြောင်းထားရမှာပါ။
2. Display အရောင်ကို ချိန်ညှိပါ
ဖုန်းကိုဝယ်ယူပြီးပြီးချင်းမှာ Display အရောင်က ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် တောက်ပနေတဲ့အရောင်ကို ဖော်ပြချင်မှာ ဖော်ပြမှာပါ။ တကယ်လို့ အရောင်က အဝါဘက်သန်းနေတယ်၊ ဒါမှမဟုတ် အပြာဘက်သန်းနေတယ်လို့ ယူဆရင် Setting – Display မှာ ကိုယ့်မျက်စိနဲ့ သင့်တော်တဲ့အရောင်ကို ချိန်ညှိလို့ရပါတယ်။ တကယ်လို့ ကိုယ်ဝယ်ယူထားတဲ့ဖုန်းက AMOLED Display နဲ့ ဖုန်းဆိုရင် အမည်းရောင် Theme တွေ၊ Wallpaper တွေပြောင်းထားတာက Black Pixels တွေကို အလင်းရောင်မပေးတဲ့အတွက် Battery စား သိသိသာသာသက်သာဦးမှာပါ။
3. New App Shortcuts ကို Disable ပြုလုပ်ခြင်း
Android ဖုန်းသစ်တစ်ခုဝယ်ယူလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ ကိုယ့်အတွက်လိုအပ်တဲ့ Application တွေကို Google Play Store ကနေ Download ပြုလုပ်ရတော့မှာပါ။ အဲ့ဒီအချိန်ကြရင် ကိုယ် Download လုပ်လိုက်တဲ့ Application တွေက Home Screen မှာ လာပေါ်နေတာက စိတ်ညစ်စရာပါ။ အဲ့ဒီအတွက် Application တွေ Download မပြုလုပ်ခင် Google Play Store ရဲ့ Setting ထဲမှာ “Add Icon to Home Screen” ဆိုတာကို အမှန်ခြစ်ဖြုတ်ထားလိုက်ပါ။
4. ညဘက်မှာ Do Not Disturb Feature ကို Schedule ပြုလုပ်ထားပါ
ညဘက်အိပ်နေတုန်း ဖုန်းဝင်လာလို့ လန့်နိုးပြီး ပြန်အိပ်လို့မရတာမျိုး ကြုံဖူးကြမှာပါ။ အဲ့ဒီအခြေအနေကို ညဘက်တွေမှာ ဖုန်းကို Do Not Disturb ထဲအလိုအလျောက်ဝင်နေအောင် ကြိုတင်ပြီး Schedule ဆွဲထားလို့ရပါတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင် ဖုန်းရဲ့ Setting ထဲမှာ ရှိတဲ့ Do Not Disturb က Schedule ကို On ပြီး ကိုယ်သတ်မှတ်ချင်တဲ့ အချိန်နဲ့ နေ့ရက်တွေကို ရွေးချယ်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ။
5. Find My Phone ကို On ထားပါ
Android ဖုန်းတွေမှာ တကယ်လို့ ဖုန်းပျောက်သွားရင် ပြန်ရှာလို့ရတဲ့ Find My Phone Function ပါဝင်ပြီးတော့ အရင်ဆုံးဖုန်းထဲမှာ ကိုယ့် Gmail Account ကို ထည့်သွင်းထားရပါမယ်။ ပြီးရင် Google Play Store ကနေ Android Device Manager ဒါမှမဟုတ် Find My Device App ကို Download ရယူပြီး ကိုယ့်ဖုန်းကို Register ပြုလုပ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တချို့ Samsung နဲ့ Xiaomi ဖုန်းတွေကလည်း သီးသန့် ဖုန်းပျောက်ရင် ရှာဖွေတဲ့ စနစ်တွေပါဝင်တဲ့အတွက် တခါထဲ ပြုလုပ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။